डिबी खड्का बुधबार, जेठ २६, २०७८, २०:५१
केही दिनपछि इमेज टेलिभिजनको हटसिटमा सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी अलग–अलग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने धेरै छन्। यदि यो पार्टी रहेन भने यसको प्रभाव के हुन्छ नेपालको भावी राजनीतिमा? यो देशमा दुईटा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति स्थापित भए, एउटा नेकपा एमाले, अर्को नेपाली कांग्रेस। यी दुवै प्रजातान्त्रिक शक्ति हुन्। देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति हुन्। यी दुई शक्ति कमजोर भए भने देशमा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा हुन्छ।’
उनले पञ्चायतकालमा राजनीतिलाई विकृत बनाउने सत्ता संरक्षित समूह मण्डलेका रुपमा स्थापित रहेको स्मरण गराए। पञ्चायत धराशायी हुनुमा त्यो समूहको अलोकप्रियताको समेत योगदान रहेको उनी बताउँछन्। उनी सन्देह प्रकट गर्छन्, ‘आज नेकपा एमालेको राजनीतिलाई विकृत बनाउन त्यस्तै समूह त खडा भएको छैन? अनि परिणाम पनि त्यस्तै हुने त होइन?’
बाह्य शक्तिको प्रभाव?
बुधबार बिहान योगेश भट्टराईले अहिले बनिरहेका असजिला ‘गठबन्धन’को स्रोततर्फ संकेत गरे। ‘एमाले एकताको समस्याको मुल जड?’ नामक सय शब्दको निबन्ध जस्तै विषय उनले फेसबुकमा लेखे।
यति लेखेपछि उनले रहस्यमय प्रश्न गरे, ‘कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब ? एमाले एकताको समस्याको मुल जड यहीँ छ।’